Faahfaahinta kulamadii Group C (Wararkii ugu dambeeyey EURO 2012)+SAWIRO – SBC
Faahfaahinta kulamadii Group C (Wararkii ugu dambeeyey EURO 2012)+SAWIRO
Posted by editor on Juun 15, 2012 Comments
Croatia oo ciriiri galisay rajadii Talyaaniga ee u soo bixiya wareega 8-da ee EURO 212 Xulka qaranka Croatia ayaa meel cidlo ah dhigay rajadii Talyaaniga ay ka lahaayeen inay u soo dhawaadaan u soo bixida wareega 8-da ee ciyaarayaha EURO 2012 ee wadajir uga soconaya wadamada Poland & Ukraine.
Xidiga khadka dhexe ee kooxda Juventus Andera Pirlo ayaa daqiiqadii 39-aad xulkiisa Talyaaniga siiyey rajo wanaagsan ka dib markii uu ku hubsadey shabaqada Croatia kubad laad xor ah (free kick) taasi oo uu u suurtagalin wayday gool ilaaliye Stipe Pletikosa in uu kubadaasi shabaqiisa ka bixiyo.
Ciyaartan oo ka dhacdey garoonka Miejski Stadium wuxuu ahaa kulankii afaraad oo taratamo koob ah oo ay isku arkaan Talyaaniga & Croatia laakiin dhamaan kulamadaasi Italy wax guul ah kama gaarin xulka Croatia oo ah wadan xornimadiisa qaatey 16 sano ka hor, kana mid ahaa Yuguslaviyadii hore.
Ciyaaryahanada Croatia oo lagu yaqaan inaanay rajo beel noqon waxay qaybtii dambe ee ciyaarta la soo baxeen kubad xamaasad badan iyagoo hurdo iyo hoyaad u diiday ciyaaryahanada Talyaaniga, waxaana aad isagu dayayeen inay kubada labada gees ka soo dhisaan oo goosha la dhex keeno arintaasi oo noqotey mid ay ku guuleysteen daqiiqadii 72-aad, ka dib markii ciyaaryahan Mario Mandzuki uu si xarago leh lugta midig inta ugu degsadey kubad la soo karoosay uu ku qabtey shabaqa taasi oo aheyd kubad aad u xoog badan uu goolhayaha Talyaaniga Buffon uu celinw aayey.
Goolkaasi wuxuu ahaa kiisii sadexaad ciyaaryahan Mandzukic isagoo la saftey Mairo Games-ka Germany iyo Alan Dzagoev –ka Ruushka oo koobkan min sadex gool leh. Talyaaniga waxaa soo marey fursado dhawr ah iyadoo ciyaaryahanada dabeedaca ka aradan Mario Balotelli uu dhawr mar kubad toogasho ah shabaqada Croatia ku tijaabiyey kuwasi oo geesaha iyo xaga sare u baxay.
Labadan kooxood oo qayb ka ah Group C waxaa hogaanka u haysa Spain oo isku dhibco afar ah wada leeyihiin Croatia laakiin ku sareysa farqi xaga goolasha ah, Croatia waxay u baahan tahay inay goosheeda ka ilaaliso inay taabato kubad wanaaga Spain kulanka xiga ay is arki doonaan laakiin taasi dood ayaa ka taagan.
Hadii Spain ay Croatia garaacdo oo Talyaanigu ka badiyo Jamhuuriyada Ireland waxaa sidaasi ku soo baxaya group-ka Spain iyo Italy, laakiin waxa kaliya ee sidaasi uu ku gaari karo Talyaanigu waa in uu badiyaa xitaa hadii Croatia laga badiyo oo Talyaanigu galo barbardhac diyaarada ayuu raacayaa.
Xulka Croatia ilaa iyo hada Talyaanigu kama badin afar kulan oo koobab loo cararayo koobkii aduunka ee 2002-dii Croatia Talyaaniga waxay ku garaacdey 2-1, isreebreebkii EURO 1996 waxa kulankii koowaad 2-1 ku badiyey Croatia kulankii labaad waxay wada galeen 1-1, koobkan EURO 2012 waxay wada geleen 1-1.
Talyaanigu ilaa iyo hada 6 kulan oo qayb ka ah koobka aduunka ihyo Euro-da wax guul ah ma gaarin. Goolka uu dhaliyey ciyaaryahan Pirlo ee ahaa laad xor ah (free kick) toos shabaqa loo dhexgaliyey waxaa ugu dambeysay in lagu dhaliyo ciyaaraha EURO sanadkii 2004-tii koobkii Gariigu qaadey.
Ciyaaryahan Fernando Torres oo bogol ka tuuray rajadii Ireland ay ku negaan laheyd EURO 2012
Kulan xiiso badan oo ka dhacay garoonka Arena Gdansk ee magaalada Gdansk ee dalka Poland qaybna ka ahaa group C ayaa waxaa fooda isdarey xulalkla qaramada Spain iyo Jamhuuriyada Ireland, kulankaasi oo ay soo xaadireen 36,500 oo daawadayaal ah.
Ciyaaryahan Fernando Torres oo ahaa ninkii Spain u dhaliyey goolkii ay ku qaaday koobkii kan horeeyey ee ay difaacanayso ayaa afar daqiiqo oo kaliya iyadoo ciyaartu socoto wuxuu kubad xoog badan oo lugta midig ku laaday dhex dhigay shabaqada Ireland iyadoo goolhayaha reer Ireland ee kooxda Aston Villa ka tirsan u diidey in uu kubadaasi qabto. Ireland oo koobkan uu ahaa kii ugu horeeyey ee heer caalami ah oo ay ka qayb gasho tan iyo sanakdii 2002-dii waxaa soo food saarey cadaadis ba’an iyagoo niyada ku haya in guuldaradii todobaadkii hore ka soo gaartey Croatia aanay ku darsan karin mid kale, hase yeeshee sidii ay fileyn ma noqon oo waxay la ciyaarayeen qaranka Spain oo xiligan ah xulka aduunka ugu wanaagsan dhanka kubada cagta.
Daqiiqadii 49-aad xidiga khadka dhexe ee ka tirsan kooxda Manchester City David Silva ayaa Ireland ka dhaliyey goolkii labaad, iyadoo daqiiqadii 70-aad Fernando Torres uu labeystey goolkiisii hore, iyadoo Ireland noqotey dooro biyo ku dhacdey.
Spain waxay kubada u maamulatey sidii ay doonto iyadoo dhexda garoonka ay kubada ku haysteen ciyaaryahanada kubad isku dhiidhiibka ku caan baxay ee reer Spain.
Inkastoo Iresh-ku isku dayeen inay fursad helaan oo ay kubada wax kala qaybsadaan Spanish-ka hadana ciyaaryahanka Cesc Febregas oo ka soo aflaxay kuliyada ciyaaraha Arsenal oo lagu badalay Torres ayaa daqiiqadii 82-aad wuxuu niyad jab iyo quusin ku ridey reer Ireland ka dib markii uu dhaliyey goolkii afaraad. Natiijada ciyaarta ayaa ku soo dhamaatey 4-0 iyadoo Ireland ilaa iyo hada wax gool ah aanay dhalin, iyadoo laga dhaliyey 7 gool laba kulan oo isku xiga.
Askarta reer Spain ee uu wato tababare Vicente del Bosque inkastoo guushaasi caaqibada leh ay gaareen hadana waxaa sugaya inay u soo baxaan wareega 8-da waana inay cahar u dhigaan reer Croatia oo 4 dhibcood ay wada leeyihiin.
Weeraryahanka reer ChelseaTorres wuxuu haatan leeyahay 30 gool oo uu u dhaliyey qarankiisa Spain, waana ninka sadexaad isagoo ay ka horeeyaan Raul oo leh 44 gool iyo Davil Villa oo leh 51 gool.
Ciyaaryahan Xavi wuxuu xaley dhigay rikoor cusub oo ah kubada baaska ciyaaraha EURO wuxuu baasay 136 jeer, isagoo ka sara marey ciyaaryahankii reer Denmark Ronald Koeman oo koobkii EURO 1992 117 jeer kubada baas dhiibay.
mohamed kaafi. says:
Juun 17, 2012 at 6:13 am
ad ayaan idiinka mahadcelinaya sida hufanaanta mudan oo ad inooga haqabtirtay lasocosha koobkan kasocada wadana poland-ukraine. hase ahate waxan jeclaan laha in bal la hubuyo in Ronald koeman u aha dutch ama danish.waxan filaya i u aha dutch. mahadsanidiin
ahmed mume hassan says:
Julaay 17, 2012 at 1:05 pm
waxaan jaclahay in uu yimaado wal cott chelsea maanta
Noofember 11, 2012 at 12:46 pm
Anigu ma jecli inu walcot nadiga arsenal inu ka tago wayo wa indhaha arsenal walcot